CIYARAHA | Radio Wadani News
Home » CIYARAHA
RadioWadani:16-10-2019-Ole Gunnar Solskjaer ayaa wajihi kara xaalad la mid ah Jose Mourinho ka dib markii garsoore Martin Atkinson loo magacaabay inuu dhexdhexaadiyo kulanka Premier League ee Manchester United iyo Liverpool ee Axada. Solskjaer ayaa cadaadis weyn ku hoos jira iyadoo United ay badisay kaliya labo kulan oo ka mid ah sideedii kulan ee la ciyaaray horyaalka xilli ciyaareedkan. Taas bedelkeeda ...
RadioWadani-October 9, 2019-Tababaraha kooxda Man United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxaa saaran cadaadis kadib guuldaradii lama filaanka aheyd ee ka soo gaartay kooxda Newcastle ciyaar ka tirsaneyd Premier League. Manchester United ayaan ceyrin doonin Ole Gunnar Solskjaer inkasta oo guuldarro 1-0 ay ka soo gaartay kooxda Newcastle kulan ka tirsanaa Premier League. Red Devils ayaa ku jirta kaalinta 12aad waxaana ...
RadioWadani-7 10 2019-Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay Tottenham Hotspur fursad siiso oo ay dib ula soo saxiixato Luka Modric. Inkasta oo Modric uu bilaabay ololihiisii siddeedaad ee garoonka Bernabeu tan iyo markii uu ka dhaqaaqay Spurs, xiddiga heerka caalami ee dalka Croatia ayaa si joogta ah loola xiriirinayay inuu baxayo ilaa xagaagii hore. Marka ...
(Yurub) 19 Sebt 2019. Habeen hore oo Talaado ahayd iyo xalay oo Arbaco ahayd ayaa la ciyaaray kulamadii koowaad ee heerka guruubyada Champions League iyadoo natiijooyin aan la filayn laga soo calaamadeeyey. Kooxda difaacanaysa Champions League ee Liverpool iyo kooxda soo qaaday Europa League ee Chelsea ayaa guuldarro la kulmay si la mid ah Real Madrid. Kooxaha Dortmund, Barcelona, Atletico ...
(Paris) 19 Sebt 2019. Goolhaayaha reer Costa Rica ee Keylor Navas ayaa kasoo hor muuqday saxaafada kaddib guushii weyneyd uu xalay la gaaray kooxdiisa cusub ee Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ayaa guul ay u qalantay kaga gaartay Real Madrid kulankeeda ugu horeeyay GROUP A ee tartanka Champions League, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0. Keylor Navas ayaa wuxuu si xoogan u ...
(Paris) 19 Sebt 2019. Daafaca kooxda Paris St Germain iyo xulka qaranka Brazil ee Thiago Silva ayaa sheegay in Real Madrid ay heshay wixii ay u qalantay, kaddib guushii weyneyd ay xalay kaga gaareen garoonka Parc des Princes. Paris Saint-Germain ayaa guul ay u qalantay kaga gaartay Real Madrid kulankeeda ugu horeeyay GROUP A ee tartanka Champions League, kaddib markii ...
(Yurub) 19 Sebt 2019. Waxaa xalay lasoo gabagabeeyay kulamadii furitaanka lugta koowaad wareega group-yada ee tartanka xiisaha badan Champions League xilli ciyaareedkan 2019/2020 ee lasoo ciyaaray maalmihii Talaadada iyo Arbacada. Waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay soo daawanay 16 kulan aad u xiiso badan ee ah furitaanka heerka grou-yada tartanka Champions League. Shabakada caalamiga ah ee Squawka ayaa daabacay shaxda kooxdii ...
(Madrid) 18 Sebt 2019. Macalinka kooxda Atlético Madrid ee Diego Simeone ayaa tilmaamay in Cristiano Ronaldo uu bahal ku yahay afaafka hor ee goolka, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday kahor ciyaarta ay caawa labada kooxood ku ciyaari doonaan taranka Champions League. Garoonka Wanda Metropolitano ayaa caawa marti galin doono kulanka la wada sugayo caawa ay labada kooxood ...
(Barcelona) 18 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa shaacisay nooca uu yahay dhaawaca soo gaaray xiddiga reer Spain ee Jordi Alba inta lagu gudi jiray kulankii xalay ee taranka Champions League. Kooxaha Borussia Dortmund iyo Barcelona ayaa dhibacaha ku kala qeybsaday garoonka Signal Iduna Park, kulankoodii furitaanka wareega group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan kaddib markii ay ku ...
RadioWadani-(Manchester) 12 Sebt 2019. Xiddigii hore kooxda Arsenal ee Mikel Arteta, isla markaana haatan ah caawiyaha tababaraha Man City ee Pep Guardiola, ayaa sheegay inuu iska diiday dalab uu ugu laaban lahaa Gunners, si uu u noqdo badelka Arsène Wenger. Sidoo kale xiddiga reer Spain ee Mikel Arteta ayaa wuxuu tilmaamay inuu iska diiday dalab kaga yimid Newcastle United. Mikel Arteta ...